Apple Watch: nyocha nyocha apple | Gam akporosis
Cristina Torres ebe a oyiyi | | Noticias, Nyocha, smartwatch
Taa bụ ngosi nke elekere Apple. N'ikwu eziokwu, apụl abịaghị n'oge na-asọpụrụ gam akporo, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-asọmpi egosiputa nzọ ha na mpaghara ahụ, ọbụnakwa nke a tụlere n'ime akụkụ ọnụ ala nwere mmeri mmeri maka imewe kachasị mma na MWC 2015 ikpeazụ, Motorola Moto 360 Site na panorama dị ka nke ahụ, ezughi na smartwatch nke ụlọ ọrụ ahụ nwere iOS n'ime. Naanị ihe dị iche na usoro sistemụ arụmọrụ dara site na oge nkwụsị nke ọ na-abịa. Ya mere, anyị ga-enyocha ma nkọwapụta teknụzụ nke Apple Watch bịarutere na ọ ga-eru.
Na ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị ga-ebido usoro nyocha na ndị nke abụgoro ndị eze nke smartwatch ụwa, Mana ugbu a, ọkachasị maka ndị na-amachaghị ihe na - eme na mbara igwe Apple, anyị ga - akọwapụta njirimara ọrụaka nke Apple Watch, yana ihe enwere ike iji ya mee, ọnụahịa na ụbọchị mwepụta. Na ihe ndị a niile, enwere obi abụọ ọ bụla ị nwerela banyere elekere apụl.Achọrọ ịmara ihe niile gbasara Apple Watch? Ngwanụ ka anyị bịaruo ya nso!
1 Nka na ụzụ njirimara nke Apple Watch
2 Apple Watch na atụmatụ ya
4 Ọnụahịa Apple Watch na ụbọchị mwepụta
Nka na ụzụ njirimara nke Apple Watch
Apple Watch bụ elekere na-abata na njedebe atọ dị iche iche na ọnụahịa. Onye ọ bụla n’ime ha nwere ike iburu igbe abụọ nke nha dị iche iche, ma n’otu oge ahụ na-enye ohere usoro nchikota site na ịgbanwe eriri ya. N'ezie, ihe ngosi nke taa ejighi data data, ihe dị iche n'ihe banyere Apple. N'ezie, anyị amaghị mkpebi nke ihuenyo ahụ, naanị na Tim Cook gwara anyị na ọ bụ ihuenyo Retina na-enweghị ndị ọzọ. Emeela ihe dị mkpa na ọrụ elekere anya, nke anyị na-enyefe ya na ngalaba na-esote nke isiokwu anyị taa na Apple Watch.
Ihe ejiri mepụta Apple Watch dị iche iche dabere na mbipụta a họọrọ. N'ihi ya, Apple WatchỌ na-abịa na igwe anaghị agba nchara na sapphire crystal; ihe Apple Watch Sport, nke kachasị akụ na ụba, nzọ na igbe aluminom ma mee ka iko Ion-X sie ike; na Apple Watch Edition, nke kachasị ọnụ ahịa, dị na ọla edo 18-karat na sapphire crystal.
Oge kachasị ike ya dị ka batrị ahụ, ebe ọ na-eru 18 awa na-eji nwayọọ eme ihe, ọ nwere ike ịbụ obere ka 6 na iji kpụ ọkụ n'ọnụ.
Apple Watch na atụmatụ ya
Ihe anyị nwere ike ime na Apple Watch ọ bụ ikekwe ihe kacha amasị ndị ọrụ. Ọ bụ ezie na Apple egosiworị anyị na Septemba wiil nke anyị bugara ma soro ya rụọ ọrụ na ngwaọrụ ahụ, na nke a, ha chọrọ ịga n'ihu. N'ezie, na nche Apple ị nwere ike ịza oku ozugbo site na smartwatch. Nke a bụ ihe a na-ekwughị na mbụ, mana na anyị ahụworị n'ihe gbasara gam akporo na atụmatụ Huawei.
Enwere ike iji nkwukọrịta mmekọrịta dabara onye ọrụ ahụ, yana ihuenyo nke elekere ga-egosipụta. Ọ nwere ike si na a dị mfe analọg elekere, ka a dijitalụ elekere na-aga aga nke ihe anyị chọrọ kacha. Na mgbakwunye, n'ime ọrụ a anyị ga-enwe ike itinye data anyị weere dị mkpa, dị ka ncheta ma ọ bụ kalenda. Anyị enweghị ike ịhapụ oge iji cheta na Apple Pay ga-etinyekwa aka na nche Apple. N'ezie, ojiji ya ga-adị mfe. Ọ ga-ezuru ịbịakwute ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ maka azụmahịa ahụ. N'ezie, ị ga - ejide onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụ ndị na - azụ ahịa, n ’ihi na otú mfe ụzọ nke ịkwụ ụgwọ, ihe ndekọ ahụ ga-ere ọkụ.
Dị nnọọ customizable imewe
Unique atụmatụ dị ka ịkwụ ụgwọ na Apple Pay
Yiri imewe ka ndị asọmpi
Ọnụahịa Apple Watch na ụbọchị mwepụta
El Ọnụahịa Apple WatchNa mbipụta ya dị ọnụ ala, ya bụ, Apple Watch Sport na ikpe 38mm bụ $ 349. Ndị a ruru $ 399 ma ọ bụrụ na anyị enweta igbe buru ibu. N'ebe dị n'etiti anyị nwere Apple Watch ọdịnala nke ọnụahịa ya ga-adị iche n'etiti 549 na 1049 dollar. N'aka nke ọzọ, Apple Watch Special Edition na ọla edo ga-efu $ 10.000.
El Apple Watch Ọ ga-adị maka ngosipụta na ụlọ ahịa na Eprel 10, mana ọ gaghị aga ahịa ruo mgbe Eprel 24 ma n'oge ahụ Spain esoghị na ahịa ndị a ga-eweta. Anyị ga-echere Apple iji gosipụta ụbọchị nke mba ndị na-esonụ nke a ga-ewebata ya iji mara mgbe anyị ga-enwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Apple Watch: nyocha nke elekere apụl
Agaghị m abụ onye ga-asị na ọ jụghị na ọ jọgburu onwe ya ma ọ bụ ihe yiri ya, mana m ga-ekwu na ọ bụ ehi dị ka osisi fir
Ee, ị nwere na ificationsma Ọkwa na gị nkwojiaka, na?